Mutumbi waVaTsvangirai Wotarisirwa Kusvika muZimbabwe Kupera kweSvondo
Mutumbi waVaMorgan Tsvangirai uri kutarisirwa kusvika muZimbabwe mukupera kwesvondo hama dzemufi dzichiti pazvinhu zvinofanirwa kugadziriswa zvakaita semagwaro anodiwa kuitira kuti mutumbi wavo uendeswe kumusha.
Mhuri yekwaTsvangirai yakaungana muRandsburg, muJohannesburg, kumba kwemwanakomana wavo, VaEdwin Tsvangirai, uko vanhu vari kuenda vachibata maoko.
Mutauriri wemhuri yekwaTsvangirai, uye vari munin’ina waVaTsvangirai, VaCollins Tsvangirai, vati mutumbi waVaTsvangirai uchasimuka muJohannesburg kana vawana magwaro anodiwa kuitira kuti vatakure mutumbi wemukoma wavo.
Vatiwo vanotarisira kuti mutumbi wemukoma wavo unge uri muZimbabwe kwesvondo rose, wozonoradzikwa kumusha kwavo kuBuhera, uko kwakaradzikwawo mudzimai wavo wekutanga, Amai Susan Tsvangirai, avo vakashaya muna 2009 munguva iyo VaTsvangirai vaive mutungamiri wehurumende muhurumende yemubatanidzwa yakaitwa pakati peZanu PF nemapato maviri eMDC.
VaCollins Tsvangirai vati mukoma wavo aive munhu ane rudo, asingatye, uyewo airemekedza ani nani zvake.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, VaDhewa Mavhinga, vati VaTsvangirai vaive munhu aimirira kodzero dzevanhu uyewo munhu akange asingatye kumisidzana naVaRobert Mugabe kana ani zvake.
Imwe nhengo yeMDC muSouth Africa, VaSocks Chikovero, vati VaTsvangirai vaive mukoma kwavari, uyewo vari mudzidzisi neshamwari.
Imwe nhengo yeMDC muJohannesburg, VaAustin Moyo, vati vari kurwadzikana zvikuru nekushaya kwaVaTsvangirai panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe.
Pane hurongwa hwekuti paitwe musangano wekurangarira VaTsvangirai muJohannesburg mutumbi wavo usati waendeswa kuZimbabwe.
VaTsvangirai, avo vanga vachisvitsa makore makumi matanhatu nematanhatu mwedzi unouya, vanga vachirapwa muJohannesburg chirwere chegomarara.
Vasiya mudzimai, Elizabeth Macheka Tsvangirai, vana vanomwe, pamwe vazukuru.